Manalava volo haingana, amin’ny tongolo
Misy akora natoraly afaka manalava ny volo ao anatin’ny fotoana fohy. Anisan’ny tena mahomby amin’izany ny fampiasana tongolo. Araho ange fa tena tsotra ny fanaovana azy e !
- Ranona tongolo : 1 sf
- Vovon-dandihazo kely
Vontonsana ranona tongolo ny vovon-dandihazo. Raha efa izay dia petapetahana amin’io vovon-dandihazo io ny hodi-doha manontolo ho vonto tsara. Orina mandritra ny minitra vitsy avy eo ilay hodi-doha. Avela hilona 15 mn izay vao kobanina. Atao isaky ny avy manasa loha, amin’ilay volo mbola mando iny.
Ny antony mampandaitra ity paipaika ity ?
Mandrisika ny fitsirian’ny volo, mampahazo aina nefa manatsara koa ny fikorianan’ny rà ny tongolo. Manaraka izay dia mamaha ireo karazan’aretina na olana hita amin’ny hodi-doha ihany koa izy, toy ny anga-drano, fa indrindra, mampitombo ny anzima amin’ny volo, izay tompon’antoka amin’ny fitsirian’ny volo. Mahatanora lalandava ny hodi-doha koa ny tongolo ary misoroka ny volo tsy hanify sy tsy ho tapatapaka. Ny singana “souffre” entiny no tena mampitsiry ny volo sola sy mampalava azy haingana.